Andininy Andrew Taylor momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Andrew Taylor
Ny tranokalan'ny orinasanao dia iray amin'ireo fanananao manan-danja indrindra. Ny fotoana laniana, ny fahazoana ary ny fahombiazan'ny famatrarana dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fehin-kevitrao. Raha efa mihazakazaka amin'ny tranokala WordPress ny tranokalanao — mifampiarahaba! —Dia efa lasa lavitra ianao amin'ny fanomezana traikefa tsy misy tohiny ho an'ireo mpampiasa anao sy ny ekipanao. Raha ny fisafidianana ny CMS mety dia dingana voalohany lehibe amin'ny fananganana traikefa nomerika mahafinaritra. Ny fisafidianana amin'ny mpampiantrano mety amin'izany CMS dia afaka manatsara ny fahombiazany, manatsara ny fotoana, mampihena